Burmese Unicode Samples
Burmese Unicode Sample
The Burmese Language Kit for OS X can be used to create just about any type of text that uses the Burmese script.
This page is encoded as Unicode (utf-8) and requiresacompatible browser like Opera andaproperly encoded Burmese font. If you don't own the Burmese Language Kit for OS X and don't useaMacintosh, you can viewaPDF version of this file.
မဟာဓမ်မရာဇာမိပတိလက်‌ထက်‌တ်ဝင်‌ အင်းဝနပ်ေရည်‌တော်‌က်ရီးသည်‌ မင်ရိမ်‌မသက်‌ဖ်ရစ်‌နသေည်‌။ မဏိပူရ ကသည်းမ်ယားက အင်းဝနပ်ေရည်‌တော်‌၏ မ်ရောက်‌ဘက်‌တလ်ဝ်ဟားကို တိုက်‌ခိုက်‌ဖ်ယက်‌ဆီးသည်‌။ အောက်‌မ်ရန်‌မာနိုင်‌ငံ ဟံသာဝတီသားတို့ကလည်း ပုန်‌ကန်‌သည်‌။ မတ်တရာ​​အုတ်‌ဖိုရ်ဟိ က်ဝရေ့်ဟမ်းမ်ယားကလည်း ထက်ရ်ဝသည်‌။
ထိုအခ်ယိန်‌တ်ဝင်‌ မုဆိုးဖိုရ်ဝာသူက်ရီး အောင်‌ဇယ်ေယသည်‌ မိမိ၏ရ်ဝာကို လုံခ်ရုံအောင်‌​ထန်းလုံး​တပ်‌မ်ယားကာရသည်‌။ အနီးအပား က်ယေးရ်ဝာ လေးဆယ့်ခ်ရောက်‌​ရ်ဝာကို သိမ်းသ်ဝင်းထားသည်‌။ မက်ရာမီပင်‌ အင်းဝနပ်ေရည်‌တော်‌က်ရီးသည်‌ ဟံသာဝတီတပ်​‌မ်ယား လက်‌တ်ဝင်း​သက်‌​ဆင်းရတော့သည်‌။
အင်းဝကို သိမ်းပိုက်‌ပ်ရီးသော ဟံသာဝတီတပ်‌မ်ယားသည်‌ မ်ရောက်‌ဘက်‌တလ်ဝ်ဟားက်ယေးရ်ဝာ​မ်ယားကို သစ်စာခံခိုင်းရန်‌ လာက်ရရာ မုဆိုးဖိုရ်ဝာသို့ ရောက်‌ရ်ဟိလာသည်‌။ တခ်ယိန်‌တည်းမ်ဟာပင်‌ က်ဝရေ့်ဟမ်းမ်ယားကလည်း သစ်စာခံခိုင်းရန်‌ ရောက်‌ရ်ဟိလာသည်‌။ ဦးအောင်‌ဇယ်ေယသည်‌ အဖ်ဝဲ့​န်ဟစ်‌ဖ်ဝဲ့ကို ခ်ရငေံစ်ဝာ ဆက်‌ဆံသည်‌။ မည်‌သူ့သစ်စာကိုမ်ယ်ဟ ခံယူခ်ရင်းမပ်ရုပေ။ ဟံသာဝတီတပ်‌ဖ်ဝဲ့​ကို အပ်ရန်‌ခရီးတ်ဝင်‌ လမ်းမ်ဟဖ်ရတ်‌၍ တိုက်‌ခိုက်‌သည်‌။ ဟံသာဝတီတပ်‌ဖ်ဝဲ့‌မ်ယား အထိအခိုက်‌​အက်ယအဆုံးမ်ယားစ်ဝာဖ်ရင့်‌ ပ်ရန်‌ရသည်‌။
ဟံသာဝတီတပ်‌မ်ယားသည်‌ မုဆိုးဖိုရ်ဝာကို လာရောက်‌တိုက်‌ခိုက်‌က်ရပ်ရန်‌သည်‌။ ဦးအောင်‌ဇယ်ေယသည်‌ သ်ဝေးသောက်‌ရဲဘော်‌‌ ခ်ရောက်‌က်ယိပ်‌ရ်ဟစ်‌ယောက်‌န်ဟင့်‌အတူ ဦးစီးကာအောင်‌​မ်ရင်‌စ်ဝာခုခံတ်ဝန်းလ်ဟန်‌နိုင်‌ခဲ့သည်‌။ ထို့နောက်‌ ဦးအောင်‌ဇယ်ေယသည်‌ မ်ရောက်‌ဘက်‌တလ်ဝ်ဟားရ်ဟိ ရ်ဟမ်းမ်ယားန်ဟင့်‌ မ်ရန်‌မာမ်ယားကိုလည်း ဆက်‌သ်ဝယ်‌စည်းရုံးနိုင်‌ခဲ့သည်‌။ ဤသို့ဖ်ရင့်‌ ဦးအောင်‌​ဇယ်ေယ၏ အရ်ဟိန်‌အဝာ မ်ရင့်‌မားလာလသေည်‌။
ဦးအောင်‌ဇယ်ေယသည်‌ အလောင်းမင်းတရားဘ်ဝဲ့ကို ခံယူကာ ကုန်းဘောင်‌မင်းဆက်‌ကို​စတင်‌တည်‌ထောင်‌သည်‌။ မုဆိုးဖိုရ်ဝာကို ရ်ဝ်ဟဝဘေိုဟု သမုတ်‌ကာ မ်ရို့နန်းတည်‌သည်‌။ နန်းတည်‌​သက်ကရာဇ်‌ဖ်ရစ်‌သော ၁၁၁၅ ခုကို ဥဩအော်‌မ်ရည်‌ ကုန်းဘောင်‌တည်‌ဟု အမ်ဟတ်‌အသားပ်ရုက်ရ​သည်‌။
အလောင်းမင်းတရားသည်‌ ဧရာဝတီန်ဟင့်‌ခ်ယင်းတ်ဝင်း မ်ရစ်‌န်ဟစ်‌သ်ဝယ်‌အက်ရား ဒသေမ်ယားကို​အခိုင်‌အမာ စုစည်းပ်ရီးနောက်‌ အင်းဝကို တိုက်‌ခိုက်‌အောင်‌မ်ရင်‌သည်‌။ ထိုနောက်‌တ်ဝင်‌ပ်ရည်‌၊ လ်ဝန်‌ဆေး၊ ဒဂုံမ်ရို့မ်ယားကို သိမ်းပိုက်‌သည်‌။ လ်ဝန်‌ဆေး ကိုမ်ရန်‌အောင်‌ဟူ၍ သမုတ်‌သည်‌။ ဒဂုံ​ကိုရန်‌ကုန်‌ဟူ၍ သမုတ်‌ထသည်‌။